Microsoft Mkpa Book Review - News Ọchịchị
Microsoft Mkpa Book Review
The Mkpa Book bụ otu n'ime ndị kasị mma Windows 10 Laptọọpụ. Ma ya party ibe bụ ihe karịrị a gimmick. Mgbe detached si ahụ na ihuenyo na-eme ka a ezigbo, ma ọ bụrụ na adịteghị, mbadamba na nke ahụ bụ ibu ebughibu na mfe ịnọgide.
laptọọpụ mbụ, mbadamba abụọ, nke a bụ ihe kasị mma Nchikota a 2-in-1 igwe na ike niile nke a zuru PC squeezed n'ime 7.7mm nke mbadamba
Isiokwu a na-akpọ “Microsoft Mkpa Book nyochaa: ndị kasị mma Windows laptọọpụ, na kemwepu ihuenyo” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Thursday 25 February 2016 07.00 UTC
The Mkpa Book bụ nke mbụ n'ime a ọhụrụ akara nke laptọọpụ si Microsoft na a ighikota, ihuenyo abịa anya.
Microsoft ala Pro akara malitere clunky: nnukwu, arọ na kama ulo oru na imewe. Ndị ọhụrụ Mkpa Pro 4 bụ thinner na ndị ọzọ ruru eru, ma mara mma nke ukwuu n'otu: Windows 10 mbadamba na a mbughari keyboard.
Ma Mkpa Book bụ a dị iche iche ụmụ anụmanụ kpam kpam: a laptọọpụ mbụ, mbadamba abụọ. Ọ dị ka ihe onye iberibe ihe dị iche, ma ọ na-eme nnọọ ihe a dị iche ma ọ bụrụ na keyboard bụ gị isi ọkwọ ụgbọala nke a na kọmputa.
laptọọpụ mbụ, mbadamba abụọ
The ihuenyo detaches si laptọọpụ isi ghọọ a mbadamba. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ekwu okwu nke na keyboard, ọ bụghị naanị a ogbi ngwa. Ọ ga-egbochi a ibu batrị, SD kaadị oghere, abụọ USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, a Obere DisplayPort na a magnetik Nchaji anya. Ma ọ pụkwara inwe a pụrụ iche ndịna-emeputa kaadị n'ime ya, dabere na nlereanya, -enye Ndị Ka Mkpa Book ọtụtụ ihe ndị ọzọ ikwo wkwo mgbe chọrọ.
Na ike nke-arụ na kọmputa na-gụnyere ke ihuenyo, nke na-eme ya ọbụna karị dị ịrịba ama otú mkpa ọ dị.
The ihuenyo na keyboard na-ejikọrọ na a fancy Fulcrum mgbabere uzo na-apụta si kama dị nnọọ pivoting. Ọ gbatịrị ogologo nke isi nke keyboard ka mma itule ihuenyo, enweghị nwere iji tinye ibu ibu.
Ọ na-ese weird, fọrọ nke nta jụụ, na na omume na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-adịghị awụfu nnọọ laa azụ na ụfọdụ ndị ọzọ laptọọpụ, ma ókè maka ala ikiri na-anọdụ n'oche.
The keyboard na ihuenyo na-mere si isi awọ magnesium alloy, nke anya na obi na-adị mma, ma akara ezi mfe. M obere oge na Mkpa Book M chọpụtara scratches na underside nke keyboard na a akara na egbugbere ọnụ n'agbanyeghị achọ mgbe ya nke ọma.
mgbe mechie, mgbabere uzo adịghị n'ogige atụrụ ewepụghị, kama o nwere ọdịiche banyere a mkpịsị aka si obosara-eke a nkpirikpi udi na tapers si 22.8mm ka a n'ókè nke 13mm oké.
Gbakwunye mbadamba na agbara maka a kemfe ngosi ihuenyo ma ọ bụ nke na-ekiri video on a ụgbọ elu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ihuenyo: 13.5na LCD 3000 x 2000 (267 ppi)
Processor: Intel Core i5 ma ọ bụ i7 (6nke ọgbọ)
Nchekwa: 128, 256 ma ọ bụ 512GB
Igwefoto: 8MP n'azụ, 5MP n'ihu-eche ihu
Njikọta: Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, SD, Obere DisplayPort
laptọọpụ akụkụ: 232.1 x 312.3 x 22.8mm
laptọọpụ arọ: 1.52 ma ọ bụ 1.58Kg
Tablet akụkụ: 220.2 x 312.3 x 7.7mm
Tablet arọ: 726g
Attaching ihuenyo azu azu ka laptọọpụ isi kwere ka nke a ga-kekọrọ ala na keyboard, ẹkenịmde ke n'akuku maka mfe ide na mkpịsị. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Dị ka ị pụrụ ịtụ anya, ịbụ a Microsoft mere igwe, Mkpa Book na-agba Windows 10, nke bụ achọghị ịzụ kasị mma Windows version ka ụbọchị.
The software adịghị n'ezie nwere ụzọ ọ bụla e Tweaks ma ọ bụ customisations maka Mkpa Book na ndị a adịghị na ihe ọ bụla ọzọ Windows 10 kọnvatịbụl.
The sistemụ bụ ma nụchara anụcha na a ọgbaghara na hà n'ike-n'ike. The ụzọ kasị mma na-akọwa ya bụ oge a na, overhauled onye ọrụ interface yikwasịkwara ozugbo n'elu otu iri na Windows.
agagharị, launching mmemme na kwa azụmahịa arụ ọrụ a top oyi akwa na ji obi nnọọ mfe iji na bara uru. Ma mgbe ị chọrọ ịgbanwe ihe dị oké njọ, iwepụ a desktọọpụ omume ka ihe atụ, ị na-booted azụ n'ime otu Control Panel m na-echeta Windows 2000 – ọ sonso gbanwere.
Ọ bụ ike, n'ezie, na i nwere ike inwe ihe dị gị mkpa ime eme, ma ihe dị iche n'etiti ihe bụ nnoo Windows 10 oyi akwa na underworkings na-ezi jarring. N'ihi na uninitiated M chee na ọ pụrụ ịbụ nnọọ atụ n'anya, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji mkpịsị aka gị na oge na mberede na-enweta na obere igbe.
Maka ozi on Windows 10 -agụ:
Windows 10 review - ikpeazụ version nke Windows nwere ike ịbụ Microsoft ji mma mgbe
E nwere di na nwunye nke ihe iburu n'obi maka Mkpa Book. Nke mbụ bụ Windows Hello, nke na-amata ihu gị na ndekọ ị na-enweghị okwuntughe, bụ kediegwu na-arụ ọrụ dị ka ngwa ngwa dị ka kọmputa nwere ike buut.
Rụọ ọrụ mbadamba mode n'ezie na-enyere mgbe na-agbalị enweta ihe ma ọ bụ jiri Mkpa Book dị ka a mbadamba.
The Mkpa Book nwere a mara mma, akwa mkpebi na pixel-n'oké ihuenyo nke nwere oké ikiri angles na anya amamiihe, ruo mgbe i ruo na ngwa na-apụghị n'ọtụtụ kwesịrị ekwesị. Mgbe ahụ ka ị ejedebe na-achọ na blurry ihe oyiyi na ederede – a n'ezie ọjọọ ahụmahụ, nke bụ a na-ahụkarị m ojiji nke desktọọpụ Windows mmemme dị ka Evernote, dị iche iche ederede editọ na ndị ọzọ na mmemme.
Ngwa ọdịnala si Windows ụlọ ahịa na-adịghị ata ahụhụ site na otu nsogbu, ma ha na-emekarị bụghị dị ka ndị dị ike. Evernote Touch bụ ezi ihe nlereanya, ma ọ bụ mma karịa ịnwa iji hụperetụ a blurry ọgbaghara.
Dị ka a na laptọọpụ
The Mkpa Book si keyboard na trackpad niile bụ ihe. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Mbụ, Mkpa Book bụ ihe kasị mma Windows laptọọpụ m mgbe na-eji. oge. Ọ bụ ngwa ngwa, nwere magburu onwe backlit keyboard, n'ezie oké trackpad, ezu ụgbọ mmiri na ọ bụ dịtụ ìhè na nanị ihe karịrị 1.5kg.
Ụfọdụ Windows laptọọpụ bụ thinner, ụfọdụ na-Mkpa ọkụ, ma ọ dịghị onye nwere ezi dị ka ezi a Nchikota ihuenyo, keyboard, ike na ulo oru haziri.
M jisiri ike nweta ezigbo arụ ọrụ ụbọchị si na ya na batrị na a ka nwere ezuru a bit nke ìhè ọgụgụ n'ụgbọ okporo ígwè obibi na mbadamba.
Ọ bụ uru arịba, ọ bụ ezie na ọ bụghị nanị na Mkpa Book, na inwe ike na-emetụ na ihuenyo maka input bụ magburu onwe, ọbụna mgbe ime agwụ ike ihe dị ka kọmputa ede, -aga dị ka ndị cursor gburugburu bụ nke ukwuu ngwa ngwa karịa iji a trackpad.
Dị ka a mbadamba
The mbadamba bụ ìhè ezu jide ruo nwa oge otu aka, ma bụ nnọọ nnukwu. Ị na-eleghi anya na-ahapụ ụlọ na dị nnọọ mbadamba nkume nke Mkpa Book. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The mbadamba na-ẹkenịmde na na keyboard site a nnọọ fancy "ebe nchekwa waya" kpochidoro usoro, nke na-agbanwe ọdịdị mgbe a ugbu a na-etinyere gafee ya. The usoro bụ electronic: ịpị a button na keyboard ma ọ bụ ihe na akara ngosi na ihuenyo disengages mbadamba.
Ị ga-akwalirịrị ya ozugbo si n'akụkụ abụọ mgbe na-ejide keyboard ala. Ọ na-ada ike, ma ọ bụghị. Attaching ọ bụ dị nnọọ a bụrụ na nke plonking ihuenyo n'elu njikọta. The abụọ mgbe ahụ adịgide onye ọ bụla ọzọ na-akpaghị aka.
Na ihuenyo ga-enịm nke ọ bụla gburugburu na keyboard isi, nke pụtara dị ka a na laptọọpụ ma ọ bụ abịazi nọdụ, n'ihi ya, ọ nwere ike apịaji ala dị ka a zụrụ notepad on a oche ma ọ bụ guzoro ọtọ dị ka a ngosi.
Ọ bụ uru arịba ama na mbadamba nwere ike na-detached mgbe Mkpa Book nwere ike, nke pụtara bụrụ na ọ nwụrụ na aka gị mgbe ahụ e nweghị reattaching ya ma ọ bụ detaching ya iji tụgharịa ya n'elu na-emechi ya anya nke ọma.
Na ihuenyo bụ nnọọ nkọ, on a par na iPad ma ọ bụ Google Pixel C, mgbe ya 3:2 akụkụ ruru pụtara na ọ bụ banyere hà na-A4 bit nke akwụkwọ. weebụsaịtị, -akpa ọchị, na akwụkwọ niile anya ukwu. Ya nwere ihe abụọ n'ihu-eche ihu ọkà okwu na-lewe gị anya nke na-ekiri video, mgbe ekweisi n'ọdụ ụgbọ mmiri dị na mbadamba, abụghị keyboard.
The 13.5in ihuenyo pụtara ya budata ibu karịa ọtụtụ ndị ọzọ na mbadamba na na 726g ọ bụ nakwa mara mma arọ. N'agbanyeghị na a zuru jiri obi ịta mmiri PC ọ bụ ka naanị 7.7mm oké, nke bụ n'ezie ezi mmasị. Nke ahụ bụ thinner karịa ọtụtụ smartphones.
M jisiri ike gburugburu awa atọ ọgụgụ ndụ nke mbadamba na a ezigbo ihie. Microsoft reckons ọ ga-esetịkwa aka awa anọ maka video playback. The mbadamba nwere ike-ebubo iche site na keyboard, kwesịrị ị chọrọ.
Nnukwu drawback nke a PC dị ka a mbadamba bụ na ozugbo-on ọdịdị nke kasị ndị ọzọ mbadamba bụghị ezi dị ka ntabi maka Windows. Ọ nwere ike ịdị a di na nwunye nke sekọnd ọ bụrụ na ọ mechie ma ọ bụghị nanị ụra, nke ọ na-eme mgbe a set oge.
The Mkpa Pen ka ọ dị mfe osisi si echiche na 12.5in ihuenyo. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Microsoft na mkpịsị bụ otu n'ime ndị kasị mma na azụmahịa, ya na ezi arọ na size. Ọ magnetically attaches rue akuku nke ihuenyo, nke nọrọ etinye mgbe m na-akpụ akpụ na gburugburu, ma ọkọdọ kụrụ aka anya na a akpa.
ọ nwere 1,024 etoju nke mgbali uche na n'ezie adịghị eche dị ka a pen na akwụkwọ. The nib nwekwara ike a ga-agbanwe ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a ike ma ọ bụ softer obi na-adị.
E nwere ihe abụọ buttons. One n'akụkụ eme ka a mmegharị igodo kpatụ ma ọ bụ na-eru omume. The top button eme ka ọ bụ nchicha na e nwere ike ahazi ka malite iche iche na mmemme ma ọ bụ igosi omume mgbe otu, ma ọ bụ abụọ pịa ma ọ bụ a pịa ma jide. Ndabara ya malite OneNote on a pịa, nke-enye gị ohere ise na ihuenyo na a abụọ ma ọ bụ otú.
The Microsoft Mkpa Book amalite na £ 1.299 n'ihi na isi ihe nlereanya na 128GB nke nchekwa, a Core i5 na 8GB nke RAM, ma na-enweghị a pụrụ iche ndịna-emeputa kaadị na keyboard.
The i5 version na 256GB nke nchekwa na a pụrụ iche GPU ọ na-efu £ 1.599. The Core i7 version na 256GB, 8GB nke Ram na pụrụ iche GPU na-efu £ 1.799 na na 512GB nke nchekwa na 16GB nke RAM £ 2.249.
n'ihi na ha tụnyere, Apple si 13in MacBook Pro (dị nnọọ laptọọpụ) amalite na £ 900, Dell si XPS 12 2-in-1 amalite na £ 899 na Asus si kọnvatịbụl T300CHI £ 800.
The isi awọ magnesium ahụ anya na-ele adịchaghị, na Microsoft si onwunwu Windows logo na azụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ bụ a ọrụ na-aga n'ihu: M na nwere a di na nwunye nke mmelite na-ofu okwu na iche na omume na igwe
Mgbe ụfọdụ ọ ga--ana site na keyboard ruo mgbe disconnecting na reconnecting ihuenyo
Mgbe ụfọdụ, ọ gaghi-abà mbadamba mode, ka a na a Malitegharịa ekwentị
Power-Azọpụta mode dị oké mkpa iji dị ka a mbadamba
Ọ na-eji ihe nke batrị na laptọọpụ mbụ, otú ahụ ka mbadamba nwere ihe ụfọdụ na ihe ọṅụṅụ ekpe ka ikwụpu ya (ị nwekwara ike na-ana mbadamba iche iche)
Mgbe ụfọdụ ọ ga Ike On mgbe e bu n'uche ịbụ na-arahụ ụra, nri onwe ya na a bag
The Fans naanị ọkụ ruo mgbe mgbe na-agbalị ime ihe arọ, ejikari ọ bụ kpam kpam nkịtị
A n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka mee ka ọ gaa pseudo-desktọọpụ, na Ethernet, USB, ekweisi na multiple Obere DisplayPorts. Otú ọ dị, a ileba anya na-arụ ọrụ ezi mgbe plugged kpọmkwem n'ime Mkpa Book gaghị arụ ọrụ mgbe plugged n'ime n'ọdụ ụgbọ mmiri.
The ihuenyo dị ukwuu, mgbabere uzo bụ na-akpali na usoro maka detaching na re-attaching ọrụ nke ọma.
The Mkpa Book bụ achọghị ịzụ kasị mma ikwere ma n'etiti a na laptọọpụ na a mbadamba, ma ọ bụrụ na gị isi ojiji na-aga ịbụ ka a na laptọọpụ. Ọ solves nsogbu nke elu Pro mgbe a na-eji on gị n'apata ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa a oche.
Ma, dị ka a mbadamba, na ngwa ọdịnala dị maka iOS ma ọ bụ gam akporo maka offline media oriri ma ọ bụ yiri na-efu efu, dị ka ndị mobile egwuregwu. Ọ bụ na-nnọọ oké ọnụ - ma n'ihi na ego ị ga-esi a dị ike igwe, na ihe ndị magburu onwe mkpịsị na a na-arụ ọrụ njikere batrị.
Uru: magburu onwe keyboard, ezigbo trackpad, amamiihe ihuenyo, oké mkpịsị, 13-hour batrị, fancy mgbabere uzo, oké 2-in-1 ikwere, kwesịrị ekwesị ọdụ ụgbọ mmiri, Windows Hello
Ọghọm: Windows nwere a mbadamba ngwa ọdịiche, software nchinchi, oké ọnụ, mbadamba-na batrị nwere ike ịbụ ogologo oge, arọ nye ya mbadamba ihe, HiDPI mode ada ada n'ihi na desktọọpụ ngwa ọdịnala, interface bụ a ọgbaghara ma ọ bụrụ na ị na igwu miri ezu
Microsoft Mkpa Pro 3 nyochaa: ndị kasị lappable mbadamba ma
Microsoft Mkpa 3 nyochaa: onye nke kasị mma mbadamba-laptọọpụ adọ ụdị ụfọdụ
Google Pixel C review: ndị kasị mma Android mbadamba bụ a viable iPad osompi
Google Chromebook Pixel review: mara mma, dị ike - ma ka na dị nnọọ Chrome
Nkeji edemede, Mgbakọ, Ngwa, Laptọọpụ, Microsoft, Microsoft Mkpa, Nyocha, Samuel Gibbs, mbadamba kọmputa, Technology, Windows, Windows 10
← The kasị nso-nso ara Technology na mepụtara [Na] Nke A Ọ Bụ The Future of Ọrụ? →